यी हुन् धनलाभ हुने २१ वटा संकेतहरु : ॐ लेखी सेयर गर्नुहोस र पढ्नुहोस - Mero Khabar Nepal
यी हुन् धनलाभ हुने २१ वटा संकेतहरु : ॐ लेखी सेयर गर्नुहोस र पढ्नुहोस
त्यस्ता संकेतलाई सम्झनु आवश्यकता हुन्छ । केही यस्ता संकेत छन् जसले भविष्यमा कसरी धन प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराहरुको बारेमा पहिलेनै संकेत दिन्छ । जुन यसप्रकार छन् : १. दीपावलीको दिन यदी कोही सुन्दरी साज–सज्जाका साथ देखिइन् भने तपाईंलाई पनि धन प्राप्त हुने संकेत हुन सक्छ ।
दोस्रो विबाह गरेका रवि लामिछाने भित्र भित्रै दुखको पहाड बोकेर पनि हाँसेका रहेछन्, २३ र १५ वर्षका दुई छोरीका बाबु रविले के गर्दैछन् तेस्रो बिहे ?
Prevप्रभु बैंकले ५ दशमलव २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने
Nextए भगवान के भएको यस्तो ? ५ वर्षकी नानीले खाइन आफ्नै हातखुट्टा, यस्तो छ अवस्था (भिडियो सहित)